किसानको समस्यालाई आत्मसात गरी समाधानमा लागि पर्छौँ – इन्सेक
कात्तिक १ गतेदेखि प्रदेश १ का विभिन्न क्षेत्रमा भएको निरन्तर वर्षासँगै चलेको हावाहुरीका कारण अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । पाकेको धान,पाक्न लागेको धान र कोदोबालीमा क्षति पुगेको प्रदेश कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रदेश कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र उपे्रतीले झापा, मोरङ, सुनसरीसहित पहाडी जिल्लामा धानबालीमा अत्यधिक क्षति पुगेको बताउनु भयो । फूल खेल्दै गरेको धान हावाले लडाउँदा सबैभन्दा बढी क्षति कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मोरङमा यस वर्ष ८३ हजार ३ सय हेक्टर, सुनसरीमा ५५ हजार र झापामा ८७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्र जमिनमा धान रोपाइँ भएको प्रदेश कृषि निर्देशनालय प्रमुख प्रकाश डाँगीले बताउनु भयो । प्रदेश १ मा यसवर्ष ३ लाख ४० हजार ८ सय २९ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती भएको छ । प्रदेश १ को ताप्लेजुङमा ८ हजार ७ सय ३७, सङ्खुवासभामा १३ हजार ८ सय ५१, सोलुखुम्बुमा १ हजार ५ सय २५, पाँचथरमा ९ हजार २ सय, इलाममा १४ हजार ८ सय १५, भोजपुरमा १८ हजार, तेहृथुममा १० हजार १ सय ७५, धनकुटामा ७ हजार ९ सय ५०, उदयपुरमा १३ हजार ३ सय, ओखलढुङ्गामा ४ हजार ४ सय र खोटाङमा १२ हजार ८ सय ९३ हेक्टरमा हिउँदे धान रोपाइँ भएको कृषि निर्देशनालयको तथ्याङ्क छ । प्रदेश १ को झापा, सुनसरी र मोरङमा वर्षाले धान,तरकारी र केराखेतीमा क्षति पुर्‍याएको छ । प्रदेश १ मा ६७ हजार ९ सय १९ हेक्टर क्षेत्रफलमा वर्षाले क्षति पुर्‍याएको कृषि मन्त्रालय प्रदेश १ ले जनाएको छ । प्रदेशमा १ अर्ब रुपियाँ बराबरको ३८ हजार ४ सय ६९ मेट्रिक टन पाकेको धानमा क्षति पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
बेमौसमी वर्षा र हावाहुरीका कारण धानबाली खेतमै नष्ट भएको छ । खेतीबालीमा क्षति भएपछि जनप्रतिनिधिहरूले के कस्ता योजना बनाएका छन् त ? प्रस्तुत छ इन्सेक अनलाइनका जिल्ला प्रतिनिधिहरूले कात्तिक १० गते तयार पार्नु भएको जनमतः
पर्शुराम नेपाल, प्रमुख, महालक्ष्मी नगरपालिका, धनकुटा
अविरल वर्षाका कारण आएको बाढीले क्षति पुगेको धानबालीको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने काम भइरहेको छ । नगरपालिकास्थित विपद् व्यवस्थापन केन्द्रलाई विवरण सङ्कलन गर्न प्रहरी र वडा कार्यलयबाट विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ । कम्तीमा बिऊसम्म आउने गरी नगरपालिकाले क्षतिपूर्ति दिने तयारी गरिरहेको छौँ । अन्य स्थानीय तहको मोडल हेरेर किसानलाई मार्का नपर्ने गरी काम गर्ने छौँ ।
वृषबहादुर राई, प्रमुख पाख्रिवास नगरपालिका, धनकुटा
नगरपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने निर्णय गरिएको छ । तत्काललाई राहत तथा पकेट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ । धान खेती भएका ठाउँमा अधिकांश क्षति भएको छ । वडा नं ५ मा खोलाले बगाएको छ । पकेट कार्यक्रम घोषणा गरेर किसानहरुलाई बिउ, मलमा राहत दिने गरी तयारी गर्नेछौ । क्षतिको विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ ।
मनोज राई, अध्यक्ष, सहिदभूमि गाउँपालिका, धनकुटा
खेतीमा धेरै क्षति भएको छ । खोला र नदीको छेउको त बगाएरै लगेको छ । १० ओटा निवेदन गाउँपालिकामा आइसकेका छन् । वडामा पनि आएको कुरा सुनेको छु । राहतको विषयमा छलफल भइरहेको छ । तर, विपदको नियम अनुसार मानवीय क्षति, भौतिक क्षति र चौपायाको क्षतिलाई हेर्ने गरेको रहेछ । बालीनालीको क्षतिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भनेर केही व्यवस्था नभएकाले सर्जिमिन मुचुल्का तयारी गरेर आएका निवेदनहरू सङ्कलन भएपछि स्थानीय विपद व्यवस्थापनको बैठक बसेर केही गर्न सकिन्छ कि भनेर सल्लाह गरिरहेका छौँ । बालीमा राहत भन्ने विपदमा नभएको र बाली बीमा गर्ने गाउँपालिकालाई अधिकार नभएकोले समस्या भएको छ ।
खजिन्द्र राई, अध्यक्ष, चौबिसे गाउँपालिका, धनकुटा
गाउँपालिकाको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठक बस्ने छ । त्यसको लागि छलफल गरिरहेका छौँ । तत्काललाई राहतको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ । धान खेती भएका ठाउँमा अधिकांश क्षति भएको छ । किसानहरूलाई बिऊ, मलमा राहत दिने गरी तयारी गर्नेछौँ । क्षतिको विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ ।
टङ्क चौहान, प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, धनकुटा
जिल्ला समन्वयमा केही हुँदैन त्यसकारण यसले के गर्न सक्छ र ? स्थानीय तहले आफूले सकेको गर्ने नसकेको प्रदेश र केन्द्र सरकारमा सिफारिस गरेर पठाउने हो । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष सिडियो हो, उनीहले गर्छन। हामीले समन्वय मात्रै गर्ने हो ।
इन्द्रमणि पराजुली, प्रदेश सांसद, धनकुटा ‘ख’
धनकुटाका धानखेती गर्ने सबै किसानको क्षति भएको कुरा आएको छ । धान उठाउनै नसकिने अवस्था आएको छ । यसको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने काम स्थानीय तहले गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारसँग कुरा भएको छ । प्रदेश सरकारको राहत वितरण गर्ने ठाउँमा निवेदन दिएको छु । त्यति गर्दा भएन भने संसदमा कुरा उठाएर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन लागि पर्नेछु ।
राजेन्द्र राई, सङ्घीय संसद, धनकुटा
किसानको क्षतिको विवरण अनुगमन र निरिक्षण गर्न चौविसे गाउँपालिका पुगेको छु । धनकुटाका धानखेती गर्ने सबै किसानको क्षति भएको रहेछ । आगामी दिनमा खाने अन्न नासिएको छ । यसको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छु । प्रदेश सरकारसँग पनि कुरा गरेको छु । सङ्घीय सरकारको राहत वितरण गर्ने ठाउँमा निवेदन दिएको छु । त्यति गर्दा भएन भने संसदमा कुरा उठाएर किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन कोशिस गर्नेछु ।
सुदन किराँती, सङ्घीय सांसद, भोजपुर
जिल्लामा वर्षातको कारण खोलाले बगाएर एक जनाको मृृत्य भएको छ । दुई ओटा घरमा भत्किएका छन् । धान तथा कोदो बालीमा क्षति भएको छ । यस विषयमा सङ्घीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मन्त्रीसँग राहतको लागि पहल कदमी गरिरहेको छु । त्यस्तै सरकारले हिमाली भेगमा घर भत्किए ५ लाख रुपियाँ, पहाडमा ४ लाख रुपियाँ र तराईमा ३ लाख रुपियाँका साथै व्यक्तिको मृत्यु भएमा मृतकको परिवारलाई २ लाख रुपियाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेको छ । धान तथा कोदो बालीमा भएको क्षतिको भने स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासनमार्फत विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । वास्तवित पीडितको पहिचान गरेर क्षतिपूर्तिको लागि उचित व्यवस्था मिलाउन पहल कदमी गरिनेछ ।
शेरधन राई, प्रदेश सांसद, भोजपुर क्षेत्र ‘ख’
बेमौसमी वर्षातले भोजपुरसँगै प्रदेश १ का १४ जिल्लामा धान तथा कोदो बालीमा ठूलो क्षति भएको छ । त्यसमा सरकारले राहतको प्याकेजको समेत घोषणा गरिसकेको छ । तराईका जिल्लाको तुलनामा क्षति भने कम नै भएको छ तर धान तथा कोदो बालीमा भएको क्षतिलाई कम भन्न मिल्दैन । पीडितहरूलाई राहत उपलव्ध गराउने विषयमा क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको र बाढीले घर बगाएकाहरूको लागि टेण्टपाल उपलब्ध गराइने छ ।
लक्ष्मण खड्का, प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, भोजपुर
अहिलेसम्म राहातको विषयमा कुनै छलफल भएको छैन । क्षतिको विवरण पनि आउन बाँकी नै छ । त्यसको विवरण आएपछि स्थानीय तह प्रदेश सरकार तथा केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर बास्तविक क्षति भएको कृषकको पहिचान गरेर राहतको लागि पहल कदमी गर्नेछौँ ।
वीरवल राई, मेयर, षडानन्द नगरपालिका, भोजपुर
बेमौसमी वर्षातका कारण षडानन्द नगरपालिकाको धान तथा कोदो बालीमा ठूलो क्षति भएको छ । समग्रमा भन्ने हो भने ४० प्रतिशतभन्दा बढी बाली नष्ट भएको छ । क्षतिको विवरण सङ्कलका लागि नरपालिकाका १४ ओटै वडाका वडाध्यक्षहरूको संयोजकत्वमा तथ्याङक सङ्कलन समिति गठन गरिएको छ । उहाँहरूबाट क्षतिको विवरण आएपछि कार्यपालिकाको बैठक बसेर कृषकको समस्याको उचित समधान गर्ने नगरपालिकाको योजना छ ।
विजय राई, अध्यक्ष, रामप्रसाद राई गाउँपालिका, भोजपुर
लगातारको वर्षातले एक जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै धान तथा कोदो बालीमा समेत धेरै क्षति भएको छ । सम्बन्धित वडाका वडाध्यक्ष, सचिव तथा सुरक्षा निकायको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा विवरण सङ्कलन भइरहेकोछ । के कति राहत दिने भन्ने हाम्रो कार्यविधिमा उल्लेख छैन । क्षतिको वास्तविक विवरण सङ्कलन भए पश्चात कार्यपालिकाको बैठक बसेर हामी राहतको व्यवस्था गर्नेछौँ ।
गजेन्द्रबहादुर कार्की, अध्यक्ष, अरूण गाउँपालिका, भोजपुर
हामीले गाउँपालिकाको कृषि शाखामार्फत क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न लगाएका छौँ । केही वडाको त क्षतिको विवरण सङ्कलन भइसकेको छ । समग्रमा हेर्दा ६० प्रतिशत बढी धानबालीमा क्षति भएको छ । यसले गर्दा भोलिका दिनमा खाद्यान्न सङ्कट नै आउने सम्भावना पनि छ । हामी प्रत्येक कृषकको घरघरमा पुगेर क्षतिको विवरण सङ्कलन गरेर समानुपातिक ढङ्गले राहत उपलब्ध गराउँछौ ।
किरण राई, अध्यक्ष, पौवादुङमा गाउँपालिका, भोजपुर
पौवादुङमा गाउँपालिकाको अधिकांश भू–भागमा धान तथा कोदो बालीको खेती हुने गरेको छ । यस वर्ष आएको बेमौसमी वर्षाका कारण कृषि क्षेत्रमा निकै ठूलो क्षति पुगेको छ । सबै वडामा क्षतिको विवरण सङ्कलनको काम भइरहेको छ । क्षतिको सबै विवरण गाउँपालिकाको कृषि शाखामा उपलब्ध भएपछि हामी कार्यपालिकाको बैठक बस्छौँ । गाउँपालिकाबाट के कति राहत दिन सकिन्छ त्यसको व्यवस्था गर्छौँ । त्यो सँगसँगै प्रदेश तथा केन्द्र सरकारसँग पनि राहतको लागि पहल कदमी गर्ने योजना छ । स्थानीय सरकार जनताको घरघरमा छ भन्ने महसुस गराउछौँ ।
विदुर सुब्बा लिङ्थेप, मेयर, मादी नगरपालिका, सङ्खुवासभा
बेमौसमी वर्षाका कारण मादी नगरपालिका धेरै प्रभावित भएको छ । वर्षाका कारण मादीमा ५० प्रतिशत धान बालीमा क्षति पुगेको छ । वर्षासँगै आएको हावाहुरीले वडा नं २ बढी प्रभावित भएको छ । मादी ४, ५ र ६ समेत प्रभावित भएको छ । बाढीले मादी–२ मा एक घर विस्थापित भएको छ । मादीमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । क्षतिको विवरण आएपछि प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकारसँग क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्नेछौँ ।
अम्बिका खवास, उपप्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, सङ्खुवासभा
कृषि ज्ञानको जानकारी अनुसार बेमौसमी वर्षाका कारण जिल्लामा १५ प्रतिशत धानबालीमा क्षति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ । स्थानीय तहले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिसकेर पूर्ण विवरण पठाएपछि आवश्यक राहतका लागि प्रदेश र सङ्घीय सरकारलाई क्षतिपूर्तिका लागि पहल गर्ने योजना छ ।
राजेन्द्र गौतम, सङ्घीय सांसद, सङ्खुवासभा
१० ओटै स्थानीय तहमा गरिएको धान बालीमा क्षति भएको छ । क्षतिको विवरण सङ्कलनका लागि सरकारी संयन्त्रहरू परिचालन गरिएको छ । मेरो जानकारीमा आए अनुसार सबैभन्दा बढी क्षति मादी नगरपालिका क्षेत्रमा भएको छ । क्षतिको विवरण आएपछि रातहका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गर्ने योजना छ ।
पवित्रा निरौला खरेल, सङ्घीय सांसद, झापा क्षेत्र नं.२
अविरल वर्षा पछि भएको क्षतिका विषयमा छुट्टै योजना बनाइएको छैन । केही स्थानीय तहको अवस्थाका बारेमा भने अनुगमन गरिएको छ । क्षतिको विवरण आएपछि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह मिलेर किसानका समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता छ । अब सरकारको प्राथमिक बाली बीमा भएकाले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि योजना बनाइने छ ।
हरिकुमार राना, प्रमुख, अर्जुनधारा नगरपालिका, झापा
वर्षापछि भएको क्षति विवरण सङ्कलनका लागि कृषि शाखालाई परिचालन गरिएको छ । किसानको क्षतिपूर्ति बहन गर्न सक्ने गरी स्रोत छैन । अहिलेको योजना अनुसार आगामी दिन नगदे बाली र बिउ बिजनमा किसानलाई राहत दिने सोच छ ।
रमेश भुजेल, अध्यक्ष, बुद्धशान्ति गाउँपालिका, झापा
बुद्धशान्तिमा २ हजार ३ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको धानबाली मध्ये ४ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानबाली क्षति भएको छ । कात्तिक ७ गते गाउँपालिका बैठकले क्षतिको विवरण प्रदेश र सङ्घमा पठाउने निर्णय गरिएको छ । गाउँपालिकाले आगामी वर्षमा पीडित किसानलाई बिउ बिजन उपलब्ध गराउने छ ।
निमसरी राजवंशी, उपाध्यक्ष, कचनकवल गाउँपालिका, झापा
नेपालको सबैभन्दा होचो भू–भाग कचनकवल हो । यस गाउँपालिकामा धानबालीलगायत किसानले लगाएको सागसब्जी नष्ट भएको छ । ठेक्कामा, अधिँया खेती कमाउने, किसानहरू मारमा परेका छन् । धानबालीमा ७५ प्रतिशत नष्ट भएको छ । किसानलाई राहत हुने गरी प्याकेज घोषणा गर्छौँ ।
बाबुराजा श्रेष्ठ, अध्यक्ष, गौरीगञ्ज गाउँपालिका, झापा
वर्षाका कारण धानबालीमा क्षति भएको छ । वडा–१ र २ मा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको छ । किसानलाई राहत दिने सवालमा गाउँपालिकाले सूचना प्रकाशन गरेर कहाँ कति धानबाली नष्ट भयो क्षति भएको तथ्याङ्क किसानसँगै माग गरिएको छ । क्षति अनुगमन टोली बनाएइको छ । अनुगमन टोलीले ल्याएको तथ्याङ्कलाई प्रदेश, सङ्घमा राहतका लागि पठाइने योजना छ ।
बसन्तकुमार नेम्वाङ, सङ्घीय सांसद, पाँचथर
जिल्लामा वर्षाका कारण बाढी र पहिरोमा परी ३० जनाको मृत्यु भएको छ । यो दुखदायी अवस्था हो । बाढीका कारण भएको क्षतिको परिपूरणका लागि ठोस व्यवस्था नभएपनि पार्टी संयन्त्रमार्फत एउटा फण्ड तयार गरी किसानलाई राहत दिने योजना छ ।
सीता थेबे, प्रदेश सांसद, पाँचथर
कृषिबालीमा भएको क्षतिका विषयमा प्रदेश सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय भएको छैन । अहिले तथ्याङ्क सङ्कलन भइरहेको छ । पूर्ण तथ्याङ्क आएपछि सोही अनुसार राहतको योजना निर्माणका लागि पहल हुनेछ ।
विष्णुप्रसाद सापकोटा, प्रमुख, जिल्ला समन्वय, पाँचथर
अहिले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेको अवस्था छ । दैवी प्रकोप उद्दार समितिको खातामा रकम उपलब्ध गराउन केन्द्रसँग माग गर्ने र सोही अनुसार किसानलाई राहतको व्यवस्था गर्ने योजना बनाइएको छ ।
अमरराज माखिम, अध्यक्ष, मिक्लाजुङ गाउँपालिका, मोरङ
वर्षाका कारण २५ जनाभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । एक वडादेखि अर्को वडासम्म पुग्ने बाटोहरू पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएका छन् । जसका कारण स्थलगत अनुगमन गर्न सकिएको छैन । क्षतिको विवरण सङ्कलन पश्चात किसानलाई सम्बोधन हुने गरी राहत प्याकेज घोषणा गरिनेछ ।
वीरबहादुर कुरूम्बाङ, अध्यक्ष, फाल्गुनन्द गाउँपालिका, पाँचथर
गाउँपालिकाको वडा नं ३ मा दुई जना र वडा–४ मा दुई जनाको पहिरोमा परी मृत्यु भएको छ । धानबालीमा ठूलो क्षति भएको छ । क्षतिको विवरण सङ्गलन गरी किसानलाई राहत प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ ।
ओनाहाङ नेम्वाङ, मेयर, फिदिम नगरपालिका, इलाम
फिदिम नगरपालिका–४ मा दुई जना र वडा नं ६ मा एक जनाको मृत्यु पहिरोमा परी भएको अवस्था छ । धानबालीमा ठूलो क्षति भएका कारण सबैभन्दा बढी किसान पिरोलिएका छन् । क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नसके पनि राहतका लागि केही योजनाहरू बनाइएको छ । क्षतिको यकिन विवरणहरू आएपछि कार्यपालिका बैठक बसेर निर्णय गर्नेछौँ ।
महेश बस्नेत, मेयर इलाम नगरपालिका, इलाम
वर्षाका कारण नगरपालिकाभित्र भएको क्षतिको विवरण सङ्कलनका लागि कर्मचारीहरूको परिचालन गरिएको छ । प्रत्येक वडामा क्षति अनुगमन टोली पुगेर ल्याएको विवरणका आधारमा नेपाल सरकारलाई क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस गर्ने योजना छ । नगरपालिका आफैँले राहतको प्याकेज ल्याउने तयारी गरेको छ ।
गणेशप्रसाद बराल, प्रमुख, जिल्ला समन्वय समिति, इलाम
वर्षाका कारण किसानहरूको सबै अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । किसानले क्षतिपूर्ति माग गर्दै आवाज उठाएको भएपनि उनीहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न सकिएको अवस्था छैन । सङ्घीय सरकारले किसानहरू क्षतिपूर्ति दिलाउने भएकाले जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन गरी सङ्घीय सरकारलाई सिफारिसका साथै स्थानीय सरकारलाई पीडित किसानका लागि सम्बोधन गर्न आग्रह गरिएको छ ।
प्रदीपचन्द्र राई, अध्यक्ष, चुलाचुली गाउँपालिकाका, इलाम
चुलाचुलीमा ३ सय ५० हेक्टर जमीनमा लगाइएको अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । कृषि शाखामार्फत क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्ने कार्य जारी राखिएको छ । क्षतिको विवरण सङ्कलन भए पश्चात कृषि ज्ञान केन्द्र, प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारलाई किसानलाई क्षतिपूर्ति दिलाउनका लागि पहल गरिने छ ।
सुरेश राई, सङ्घीय सांसद, उदयपुर
वर्षाका कारण भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । हाम्रो पार्टी पनि सरकारमा भएकाले हामीले गृहमन्त्री र कृषि मन्त्रीसँग संयुक्त रूपमा छलफल गरिरहेका छौँ । म आफैँ पनि वर्षाका कारण भएको क्षतिको अवस्था बुझ्न पाँचथर र धनकुटा गएको थिएँ । उदयपुरमा भने अन्य जिल्लाको तुलनामा क्षति कम भएको छ । सरकारले वर्षाबाट प्रभावित किसानका लागि प्याकेजमा राहत ल्याउँदै छ ।
अम्बिका थापा, प्रदेश सांसद, उदयपुर
उदयपुरमा वर्षाले धानबालीमा पुगेको क्षति टिठ लाग्दो छ । वर्षाले भिजाएको धानमा टुसा पलाएको छ । किसानलाई परेको असरका बारेमा प्रदेशका मुख्य मन्त्रीलाई दलको बैठकमा जानकारी गराएको अवस्था छ । संसद नचलेकाले सदनमा आवाज उठाउन पाएको छैन । मुख्यमन्त्रीले किसानहरूका लागि एकद्वार प्रणालीबाट राहतको प्याकेज दिने बताउनु भएको छ ।
दुर्गाकुमार थापा, मेयर, बेलका नगरपालिका, उदयपुर
हामीले पानी पर्नु तीन दिनअघि किसानलाई बाली थन्क्याउन सूचना दिएका थियौँ । तर, त्यो प्रवावकारी हुन सकेन । जसका कारण धानबालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । दैनिक मजदुरी गरेर जीवन चलाउने परिवारलाई तत्काललाई २५ केजी चामलसहित नुन, तेल, दाललगायत उपलब्ध गराएका छौँ । मौसम विज्ञान विभागले पानी पर्छ भनेपछि हामीले ट्याक्टर, जेसीबी, सशस्त्र, सेना पुलिस सबैसँग सहकार्य गरेर उद्धारको लागि तयारी गरेका थियौँ । जसले गर्दा यसपटक हाम्रोमा धेरै क्षति हुन पाएन । तरपनि हामीले अहिलेको वर्षाले गरेको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न एक वडा एक प्राविधिक खटाएका छौँ । अहिलेलाई भने हामीले किसानलाई आउने वर्ष जति धानको बिउ लाग्छ त्यति धानको बिऊ निशुल्क दिने र क्षति नभएकाहरूलाई पनि ५० प्रतिशत धानको बिउ निशुल्क उपलब्ध गराउने तयारीमा छौँ ।
देवी चौधरी, उपप्रमुख, त्रियुगा नगरपालिका, उदयपुर
वर्षाका कारण जिल्लामा २५ प्रतिशत धानबालीमा क्षति पुगेको कृषि ज्ञान केन्द्रको प्रारम्भिक तथ्याङ्क छ । नगरपालिकाभित्र भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । कात्तिक ५ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग छलफलका आधारमा सबै स्थानीय तहले तत्काल विवरण बुझाउने निर्णय गरिएको छ । क्षतिको विवरण सङ्कलन भएपश्चात सोही अनुसार राहत प्याकेज उपलब्ध गराउने योजना छ ।
खगेन्द्र राई, मेयर, चौदण्डीगढी नगरपालिका, उदयपुर
वर्षाका कारण चौदण्डीमा धेरै क्षति भएको छैन । तर केही वडाहरुमा भने धानबालीमा क्षति पुगेको छ । क्षतिको विवरण सङ्कलनपछि नगरपालिका आफैँले किसानहरूलाई राहत प्याकेजमार्फत सम्बोधन गर्ने योजना छ
युवराज सुनुवार, सङ्घीय सांसद, ओखलढुङ्गा
वर्षाका कारण भएको क्षति अनुसार राज्यले किसानलाई दिन नसकेपनि राहत प्याकेज भने ल्याउने छ । संसद बैठक चलेपछि जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण पेश गरी सोही अनुसार जिल्लाका किसानहरुलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकारसँग आग्रह गरिने छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारले किसानहरुलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
अम्बीरबाबु गुरुङ, प्रदेश सांसद, ओखलढुङ्गा
वर्षाका कारण भएको क्षति अपूरणीय भएपनि प्रदेश सरकारले किसानलाई राहत प्याकेज ल्याउने विषयमा छलफल भएको छ । किसान लक्षित के कस्ता कार्यक्रम लैजान सकिन्छ, भन्ने विषयमा आन्तरिक मामिला राज्य मन्त्रीसँग छलफल गरेको छु । किसानहरूका राहत प्याकेज सञ्चालन गरिने तयारी छ ।
जयबहादुर श्रेष्ठ, अध्यक्ष, जिल्ला समन्वय समिति, ओखलढुङ्गा
वर्षाका कारण अन्नबालीमा प्रशस्त क्षति भएको छ । जिल्लामा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन पश्चात सोही अनुसार स्थानीय सरकार, प्रदेश र सङ्घीय सरकार समक्ष किसानलाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरिने छ । किसानको समस्या समस्या सम्बोधनका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत सरोकारवालाहरू छलफल गरेको छु ।
रूद्रप्रसाद अधिकारी, अध्यक्ष, सुनकोशी गाउँपालिका, ओखलढुङ्गा
वर्षाका कारण अन्नबालीमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन भइरहेको छ । यकिन विवरण प्राप्त भएपछि गाउँपालिकाले किसानलाई सम्बोधन गर्नेछ । किसानहरूबाट क्षति भएको खबर आएका छन् । यस विषयमा के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । अन्न बालीमा भएको क्षतिको विवरण सङ्कलनका लागि कृषि शाखालाई परिचालन गरिएको छ । केही दिनमै कार्यपालिका बैठक बस्ने र किसानलाई राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरिने छ ।
मोहनकुमार श्रेष्ठ, मेयर, सिद्धिचरण नगरपालिका, ओखलढुङ्गा
बेमौसमी वर्षाका कारण किसानले लगाएको अन्नबालीमा क्षति पुगेको छ । सबैभन्दा बढी क्षति भएका किसानलाई पहिलो चरणमा सम्बोधन गर्ने विषयमा छलफल गरिएको छ । त्यसपछि अन्य किसान लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना छ । नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममै किसानलाई प्राथमिकतामा राखिएकाले अन्नवाली क्षति भएका किसानलाई हामी उचित सम्बोधन गर्ने गरी योजना बनाएका छौँ ।
शान्ता ढुङ्गेल, उपाध्यक्ष, लिखु गाउँपालिका, ओखलढुङ्गा
वर्षाका कारण अन्नबालीमा क्षति भएको जगजाहेर नै छ । गाउँपालिकाभित्र भएको क्षतिको विवरण सङ्कलन हुँदैछ । हामी किसानलाई सम्बोधन हुने गरी राहत प्याकेज ल्याउने छौँ ।
(प्रस्तुतीः धनकुटा-इश्वर थापा ,भोजपुर-गणेश विष्ट, सङ्खुवासभा-भविन कार्की, झापा -नरेश खाती पाँचथर -सहमान बिक, इलाम -बबिता मैनाली ,उदयपुर- सुजता ढुङ्गाना र ओखलढुङ्गा -सरस्वती बानिया)
महिलाको आयआर्जनमा वृद्धिले हिंसा न्यूनीकरण
हाम्रो वरपर दैनिक रूपमा महिला हिंसाका घटना भएका भनी प्रहरीमा उजुरी गर्ने तथा सञ्चारमाध्यममा समाचार आउने क्रम बढ्दो छ । महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले के गर्नु आवश्यक छ…
०७८ असोज २७ गते